“ပယ်စေသင့်၏မသင့်၏ လက်ခံကောင်း၏မကောင်း၏” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ပယ်စေသင့်၏မသင့်၏ လက်ခံကောင်း၏မကောင်း၏”
Posted by ကိုေပါက္(မႏၱေလး) on Aug 26, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 16 comments
ပြီးခဲ့လပိုင်းက မန္တလေးမှာ မိန်းမလျာ တွေကရဲတွေဖမ်း တဲ့ကိစ္စက
အရှေ့ကျုံးဒေါင့် ဆီဒိုးနားဟိုတယ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ ညညသောင်းကျန်းနေတဲ့
မိန်းမလျာတွေကို ဖမ်းပြီး မိဘတွေလက်ကိုအပ်ခံဝန်ချုပ်တွေလုပ်ခိုင်းပါတယ်။
အချို့မိဘတွေက ကိုယ်မွေးထားတဲ့ သား ဒီဘဝရောက်နေတယ်ဆိုတာ မသိပါဘူးတဲ့
အဲဒီအခါမှာ မိန်းမလျာ လို့ခေါ်တဲ့ လိင်တူချစ်သူတွေကလဲ
လာဖမ်းတဲ့ ရဲတွေကလူ့အခွင့်အရေး ချုးိဖောက်တယ်
သူတို့ကို မဖွယ်မရာလုပ်တယ် အရှက်တကွဲဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီး
တရားစွဲမယ် ဥပဒေဘောင်အတွင်းကပြောမယ်ဆိုပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ကြပါတယ်။
လိင်တူချစ်သူများက မကျေမနပ်ဖြစ်နေပေမယ့် လူအများစု ကတော့ ဒီလိုဖမ်းတာကို
အဲဒီမှာလာလာ ကဲကြတဲ့ မိန်းမလျာ တွေသောင်းကျန်းတာကို စိတ်ကုန်နေကြလို့ပါ။
သူတို့အထဲမှာလမ်းသွားလမ်းလာတွေကို အတော်လေး ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်အောင်
မန်းလေးဆိုတာ ဒီလိုလူတန်းစားတွေကို ဘာမှသိပ်အရေးမစိုက်ဘဲ
ဟိုးအရင်က ကျုံးနံဘေးမှာရှိတဲ့ မန်းသီတာဥယျာဉ်ရယ် တောင်ဘက်ကျုံးလမ်းရယ်က
ညအချိန်ဆိုရင် မိန်းမလျာတွေ ကြီးစိုးတဲ့နယ်မြေပါဘဲ။
အမှောင်ကို အကာအကွယ်ယူပြီး လာသမျှလူကို အီစီကလီလိုက်လုပ်ကြတော့တာပါဘဲ။
သူတို့တစ်တွေက အုပ်စုဖွဲ့ပြီး နေကြတော့ လူကောင်းသူကောင်းတွေက သူတို့ကိုရှောင်ကြပါတယ်။
နောက်တော့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကာလများမှာတော့ အတော်လေးငြိမ်သွားပြီး
၂၀၀ဝခုနှစ်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်နှစ်သစ်ကူးညမှာ အရှေ့ကျုံးဒေါင့်မှာ နှစ်သစ်ကူးပွဲဆင်နွဲရာကနေစပြီး
တစ တစနဲ့ သူတို့ကြီးစိုးတဲ့နယ်မြေဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။
ကန့်ကွက်ကြ နဲ့ အတော်လေးကို တက်တက်ကြွကြွပါဘဲ။
တကယ်တော့လဲ မန်းလေးဆိုတာ ဒီလိုလူတန်းစားတွေကို ခွင့်လွှတ်ထားတဲ့မြို့ဆိုလဲမမှားခဲ့ပြန်ပါဘူး။
မြန်မာပြည်ရဲ့အထင်က ရနတ်ပွဲဆိုတာ မန္တလေးအနီးတစ်ဝို်က်က
မာမီကြီးတွေ မာမီလေးတွေမာမီပိစိကွေးတွေ လက်သင်မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေ
အစရှိတဲ့မြန်မာတစ်ပြည်လုံးက ဒီလိုလူတန်းစား အယုတ်အလတ်အမြတ်မရွေး မန်းလေးကိုအုံလိုက်ကျင်းလိုက်ဆင်းလာတတ်ပါတယ်.။
ဒါကြောင့်လဲ မန်းလေးကိုဒီအချိန်လောက်သာ အလည်လာဘူးတဲ့သူက အခြောက်မြို့တော်လို့
ယောကျာ်းလေးကနေ မိန်းမစိတ်ပေါက်လို့ မိန်းမလို ဝတ်စားလို့နေသူများကို
မိန်းမရှာ မာမရှိန်း အခြောက် ဂန်ဒူး ဂျီပုန်း ဆိုပြီးခေတ်အဆက်ဆက် အမျိုးမျိုးခေါ်ကြပါတယ်။
ရှေးဘဝက ဝဋ်ကြွေးလို့ ဘာသာရေးအမြင်နဲ့ကြည့်သူလဲရှိ၊
X ဟိုမုန်း နဲ့ Y ဟိုမုန်း ဟိုဟာများလို့ ဒီဟာများဖြစ်ရတာလို့ ဆေးပညာအမြင်နဲ့ကြည့်သူလဲရှိ၊
ဗီဇစိတ်ကိုက ဖြစ်နေတာ ပြုပြင်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့ကြည့်သူလဲရှိဆိုတော့
မိန်းမများတဲ့မိသားစုမှာနေလို့ နုနုရွရွလေးနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လှတပတလေးဖြစ်အောင်’သ’နေသူရှိတယ်။
ယောက်ျားလေးတွေကိုမှ ဇွတ်လိုက်ပြီး ပရောပရီနဲ့ နေတဲ့သူရှိတယ်။
မိန်းကလေးလိုဝတ်စားထားပေမယ့် ကိုယ့်မာနနဲ့ကိုယ် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ကိုင်စားသောက်သူရှိတယ်။
ယောက်ျားလေးကိုကျွေးမွေးပေးကမ်းပြီး သူ့ရဲ့ယောက်ျားလို သဘောထားပြီး ပေါင်းသင်းနေသူရှိတယ်။
ခြောက်လက ယောက်ျားလိုနေ ခြောက်လက မိန်းမလိုနေ ပြီး ဘဝကို ထက်ဝက်ခြမ်းထားသူရှိတယ်။
ယောက်ျားပုံစံဒေါင်းတိမောင်းတိ နေပေမယ့် လူကွယ်ရာကျမှ မိန်းမစိတ်ပေါက်နေသူလဲရှိတယ်၊
အိမ်ထောင်ရက်သားကျပြီးသားသမီးတွေရှိနေပမယ့် ဆိတ်ကွယ်ရာမှာတော့ လိင်တူခြင်းကို မှ
ှ လိုက်ပြီး မြူဆွယ်နေသူလဲရှိတယ်။
အဲဒီအထဲမှာ တကယ်မခြောက်ဘဲ အခြောက်ဟန်ဆောင်ပြီးစီးပွားရှာကြသူတွေလဲရှိပါတယ်။
အရင်ကလမ်းတကာလည် သီချင်းဆိုပြ ကပြ ပြီး ရှောက်သီးဆေးပြားတို့အချဉ်ထုပ်တို့ရောင်းတဲ့
နီးစပ်ရာ ဆိုင်တွေမှာအ ရောင်းသမားတို့ အပ်ချုပ်ဆိုင်မှာအကျင်္ီချုပ်တာ
နှစ်ယောက်စတော့ ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာပြည်က လူအများ ယုံကြည်ကြတဲ့ နတ်ကိုးကွယ်မူ့အလေ့အထရှိနေတော့
ဒီလိုတောင်ပြုံးပွဲ တို့ ရတနာဂူပွဲဆိုတာကတော့ သူတို့အတွက်တကယ့် ပွဲကြီးလမ်းကြီးပါဘဲ။
သူတို့လိုလူတွေ တရားဝင်လူစုခွင့်ရတဲ့ ပွဲလဲဖြစ်ပါတယ်။
နတ်ပွဲဆိုတာနဲ့ မိန်းမလျာ ပွဲတွေဘဲ အများစုဖြစ်နေပါတယ်။
အဲတော့ မိန်းမလျာ ဆိုရင် နတ်ကတော်လို့ဘဲ သတ်မှတ်ထားကြတာများပါတယ်။
အချို့ကတော့ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းမှာ မင်းသမီးတွေရဲ့တိုးတိုးဖော်တိုးတိုးဖက်လက်စွဲတော်လိုလို
မိတ်ကပ်လိမ်းပေးသူ လိုလို အဖြစ်နဲ့ နေကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။
အကအဖွဲ့လေးက ခေတ်စားခဲ့ သလို လူအများကလဲ လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။
ကျနော်အထင်တော့ အဲဒီအချိန်က စလို့ သူတို့လိုလူများအတွက် လူတောထဲ
ဝင်ဆန့်နို်င်ဘို့အခွင့်အရေး ရလာခဲ့တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
အဝတ်အစားဒီဇိုင်းတွေထုတ်တဲ့နေရမှာလဲ သူတို့က စူးရှတဲ့အမြင်ရှိသလို အမျိုးသမီးများအကြိုက်ကို
အလှအပနဲ့ပါတ်သက်တဲ့နေရာမှာ သူတို့တစ်တွေရဲ့ အာရုံက ပိုပြီး ထူးခြားနေတတ်ပါတယ်။
သူတို့က မရှက်မကြောက်နဲ့လုပ်ရဲတဲ့ အစွမ်းသတ္တိလဲရှိကြပါတယ်။
ဒီတော့လဲ ကောင်းမွန်စွာလုပ်ကိုင်ချင်သူအဖို့ နေရာသစ်တစ်ခုရလာခဲ့ကြတာပါ။
အရင်ကထက်စာရင်သူတို့အတွက် အခွင့်အလမ်းတွေပိုလို့ ပွင့်လာပါတယ်။
ရှပ်ရှင် ဗွီဒီယိုလုပ်ငန်းတွေမှာ အလှပြင်ပေးရတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိ
မာမီ အမည်ခံပြီး တပည့်တပန်းတွေနဲ့ တစ်ထီးတစ်နန်းနေနိုင်တဲ့ခေတ်ရောက်လို့လာပါတယ်။
ဟိုးအရင်ကစလို့အခုချိန်ထိကျနော်တို့မြန်မာ့အသိုင်းအဝိုင်းက မိန်းမလျာ တွေကို
ကိုယ့်အမျိုးအဆွေထဲမှာဒီလိုလူမျိုးပါလာရင် အင်မတန်မှကို အရှက်သည်းကြတဲ့သူတွေလဲရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့်သူတို့တစ်တွေကို လွန်လွန်ကဲကဲ ပြဿနာမရှာသလို နေရာပေးဆက်ဆံခြင်းလဲမရှိကြပါဘူး။
အဲတော့ မိန်းမလျာ တွေက ခပ်ကုပ်ကုပ်နဲ့ကွယ်ကွယ်ဝှက်ဝှက်နေကြရတာများပါတယ်။.
ကျနော်တို့ဆီမှာသာ ပြဿနာမကြီးပေမယ့် ကမ္ဘာမှာတော့ သူတို့လူတန်းစား
လိင်တူဆက်ဆံသူလို့ လူသိရှင်ကြားဖြစ်သွားတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် ရာထူးကဖယ်ရှားခံရတဲ့
အဲဒီအထဲကမှ AIDS ဆိုတဲ့ရောဂါဆိုးကြီးက လိင်တူဆက်ဆံသူတွေဆီကနေကူးစက်တယ်
အဲဒီအချိန်မှာသူတို့လို တူရာလူတွေစု အဖွဲ့အစည်းတွေထောင်ကြ ဆန္ဒပြကြတာတင်
မကတော့ ဘဲ လက်နက်ကိုင်ပြီး ပြန်လည်တိုက်ခိုက်တဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားတဲ့အခါမှာ
တော့ အုပ်ချုပ်သူတွေ ခေါင်းစား ရတဲ့ အနေအထားကိုရောက်သွားပြီး သူတို့ပြဿနာကို
ကျနော်တို့ဆီမှာတော့ အခုအချိန်မှာ သူတို့လိုလူတန်းစားက လူမူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ
ဒါကလဲ ဆင်ခြင်နို်င်စွမ်းရှိသူတွေက သူတို့နဲ့ သင့်တော်တဲ့အတတ်ပညာတွေကို
အရင်က လူကဲ့ရဲ့စရာ နောက်ပြောင်စရာ လူတန်းစားအဖြစ်ကနေ အတတ်ပညာနဲ့
ပါတ်သက်ပြီး လူအလေးစားခံရသလို ပွဲလမ်းသဘင်တွေမှာလဲ တက်ရောက်ခွင့်ရလာပြီး
အခုအချိန်မှာ တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြောရင် သူတို့ကလဲ လူများစုဖြစ်လာပါပြီ။
လူဆိုတာ ကိုယ်နှစ်သက်ရာပုံစံနဲ့ နေထိုင်နို်င်တာကတော့
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်နှစ်သက်တဲ့ရွေးချယ်မူ့ကအခြားသူတွေကို အနှောင့်
နောက်တစ်ချက်က အခြားသူက မိမိအပေါ်မှာအထင်သေးခြင်းမသေးခြင်းဆို
အဲတော့ လူရာဝင်အောင် လူတန်းစေ့အောင် ဖြစ်လာဘို့က
ဒါပေမယ့် လိင်တူခြင်းလက်ထပ်ပေါင်းသင်းတာကတော့ သဘာဝတရားနဲ့ဖြစ်စေ
ဘာသာတရားနဲ့ ဖြစ်စေ ၊တရားဥပဒေနဲ့ဖြစ်စေ ချိန်ထိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့
လူသားမျုးိနွယ်ကြီး ပွားများလာဘို့က အဓိကအချက်ပါ။
ဒီလိုနေတဲ့အတွက် ဝိုင်းပယ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ ခံယူနိုင်ပါတယ်။
နို့မဟုတ်ရင် အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်ရပါသည် ဆိုပြီး
လောဘ မာန သစ္စာ မေတ္တာ ဒေါသ မောဟ ဘာမဆို
ဒါတွေဒီလောက်လူ့ပါတ်ဝန်ကျင်မှာပြဿ နာတွေ ပြောစရာတွေ
ဖြစ်လာရတာလဲဆိုတာကလဲ ထိန်းကြောင်းမူ့ ခွင့်ပြုထားမူ့
မသိလိုက်ဘာသာ နေမူ့ အစအစတွေကြောင့်လဲဖြစ်လာတယ်
ကျနော်တော့ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်စိတ်ဝင်ခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးအဖြာဖြာ
ကို လူထုမီဒီယာတွေကနေ မိဘများအချိန်မလွန်ခင် ထိန်း
ကျနော့်ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီလို ဂေးပေါက်စတွေကို သူတို့မိဘများ
က စောစောသိပြီး နည်းမျိုးစုံနဲ့ ထိန်းကြောင်းပေးတော့ ခုများဆို
မိန်းမနဲ့ သားသမီးနဲ့ အဆင်ပြေနေကြပါပြီ။
အရင်ဆုံး၎င်းတို့ရဲ့အုပ်ထိန်းသူများ ၏ဆန္ဒ များသဘောတူ
အသက် ၁၈ နှစ်အထက် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဘာတွေနဲ့
တော့လာမပြောစေချင်ဘူး။ မြန်မာ့ဓလေ့ စရိုက်ကချန်လို့မရဘူး
ကိုယ့်သဘောနဲ့ဆိုရင်တော့ သူတို့ဘာသာ မိန်းမစိတ်ဝင်တာကို အပြစ်မပြောလိုပေမယ့် …….
ပတ်ဝန်းကျင်ကို လူအများကို ဒုက္ခပေးတာတွေကိုတော့ ရှုတ်ချတယ်။
ကိုပေါက်ရေ…. သိပ်မှန်ကန်တဲ့ အရေးအသားလို့တော့
အဲ.. အဲ.. လူသားအရင်းအမြစ်ကို ပြုန်းတီးထိခိုက်အောင် လုပ်မယ့်
ဇာတ်တူသားစားလို့ ဟင်္သာကိုးသောင်းမျိုးပြုတ်ခဲ့ဒါတွေ မသိလို့များ
ဒါမှ တာမီးလေးတွေ တားတားတို့ အကုန်ရမှာ…
စကားမစပ်.. သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ နာမည်ကျော် Prison Break ဇာတ်လမ်းတွဲက
မင်းသား စကိုးဖီလ်ကလည်း ဂေလ်းပါလို့ ဝန်ခံသွားဒယ်နော်…
အသီးကွဲပါဘီ သိန်းငှက် ညက်လုံးလေးရယ်…
လိင်တူချစ်သူကို မုန်းသူများကလည်း စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့မုန်း
လွန်လွန်ကျွံကျွံတွေ မဖြစ်အောင် ထိန်းနိုင်သူများကလည်း ထိန်းးး
သူ ့အကန့် ကိုယ့်အကန့်ခွဲ နေထိုင်ပြီး
လူ့အဖွဲ့အစည်းကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ဖို ့
အဟိ ကိုယ်တွေးမိတာလေး ဝင်ပေါတာပါ လေး ပေါက်ရေ
လိင်တူချစ်သူအခွင့်အရေး တက်ကြွ လှ ုပ်ရှားသူ ဆိုပြီး အမည်တပ်ဦးမလား မသိ ။
သူတို့လည်း လူပါပဲလေ ဆိုပြီးတော့ ပြန်လည် နေရာပေးလာရာက
ဟိုတုန်းကတော့ သူတို့ဟာ သီးသန့် သူတို့ဖာသာပဲ နေကြတာ
အခုတော့ သူတို့ဘက်ပါအောင် ဆွယ်တာတွေ ရှိလာပြီ ဗျ။
သဘာဝ တရားကို လွန်ဆန်သလို ဖြစ်နေတာကြောင့်
ကျွန်တော်ကတော့ အဲသလို လက်ထပ်တာတွေကို လက်မခံဘူး လို့ ပြောချင်မိပါသဗျို့
Myanmar Miss Red Ribbon 2009 ကလည်း
ဒွတ်ခ..ကျုပ်က စကိုးဖီလ် ကြိုက်လို့ ဂျီတော့မှာတောင်သူ့ပုံတင်ထားတာ
ကိုမိုက်တို့များ တင်တုန်းကတင်ခဲ့ပြီးမှ အခုမှတော့ ဟိုဝေ့ဒီဝေ့လုပ်မနေပါနဲ့တော့ဗျာ။
ဂေးအထီးတွေချည်းပါတဲ့ တက္ကသိုလ်လက်ရွေးစဉ် ဘက်စကတ်ဘောအသင်းကို…
မီဒီယာတွေက ဇောင်းပေးပြီး မြှင့်တင်လိုက်တာ…
ရလဒ်ကတော့ အခုဖြတ်ဖောက်ချုပ်တွေ ပေါ်လာတာပါပဲ…
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဂေးချင်ရင်ဂေးကြပါ၊ သူတပါးကို မြှူဆွယ်ရင်တော့ ဆောဒီးပါလို့…
အင်း.. အမျိုးသားတွေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အမျိုးသမီးစိတ်ဝင်ကြတာကို မဝင်ကြဖို့ တားလို့မှမရတာ။ သူတို့နှစ်သက်ရာ ရပ်တည်မှုနဲ့ နေထိုင်ဖို့က သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးပါ။
သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးထက်ပိုပြီး ပါတ်ဝန်းကျင်ကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်အောင်လုပ်တာမျိုးကိုတော့ လက်မခံချင်ပါဘူး။
အမျိုးသမီးစိတ်ဝင်နေတဲ့ အမျိုးသားတွေက ယောက်ျားလေးတွေကို ကြိုက်ကြ၊ ချစ်ကြ၊ ပိုးပမ်းကြတာ ပုံမှန်ပါပဲ။
သူတို့က သူတို့ကိုယ်သူတို့ မိန်းမအဖြစ်ခံယူထားတော့ သူတို့နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ယောက်ျားလေးတွေကိုပဲ စိတ်ဝင်စား တော့တာပေ့ါ။
အဲ….. Green Rose နားမလည်နိုင်ဆုံးကတော့ အမျိုးသားစစ်စစ်ကြီးတွေက ဘာကြောင့်များ အမျိုးသမီးစစ်စစ်တွေကို ကျော်ပြီးတော့ အဲဒီ့ အမျိုးသမီးစိတ်ဝင်နေတဲ့ အမျိုးသားတွေကို ချစ်မိကြ၊ ကြိုက်မိကြ နောက်ဆုံး လက်ထပ်ကြတာမျိုးများ ဖြစ်ကြရတာပါလဲလို့…..
လိင်တူခြင်း လက်ထပ်တာကို ခွင့်ပြုဖို့ မပြုဖို့ဆိုတာကတော့……. Green Rose ကတော့ ခွင့်ပြု သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
သဘာဝအတိုင်း မိန်းမစစ်စစ်နဲ့ ယောက်ျားစစ်စစ် လက်ထပ်ကြတာတောင်မှ အိမ်ထောင်ရေးမှာ မသာယာနိုင်ကြတာတွေ အများကြီးပါ။ အဲဒီ့သဘာဝကို လွန်ဆန်ပြီး လိင်တူခြင်း လပ်ထပ်ကြတဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ဘယ်လောက်များ စိတ်ချမ်းသာနိုင်ပါမလဲ။… ဥပဒေက ခွင့်ပြုလို့ လက်ထပ်ကြသည့်တိုင်အောင် ပါတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ သူတို့ ရင်ဆိုင်ရမှာတွေက အများကြီးပါ။ အဲဒါတွေကိုမှ ခံနိုင်ရည်ရှိလို့ လက်ထပ်ချင်သပဆိုရင်တော့ ခွင့်ပြုသင့်ပါတယ်လို့ပဲ….
(လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ရှိသင့်ပါတယ်)
တင့်တင့်တယ်တယ် လောကကို အလှဆင် ကောင်းကျိုးပြုနေသူတွေလဲရှိ ဆိုတော့
မကြားဝံ့ မနာသာ…မတင့်တယ်၊မြင်မကောင်းအောင် အကျည်းတန်စေသူတွေလဲ ရှိပြန်တော့
လက်ခံကောင်း၏ လားဆိုရင်…မကောင်း၏ ။
လို့ အမေးအဖြေ လုပ်လိုက်ပါတယ် ….
“ပယ်စေသင့်၏မသင့်၏ လက်ခံကောင်း၏မကောင်း၏” ဆိုတဲ့အပေါ် မအိ အမေးအဖြေလေးမန့်သွားတာ အားကျပြီး ကျွန်တော်လည်း ဖြေလိုက်မယ်ကိုပေါက်ရေ “ နေမြဲ´´
ကမ္ဘာ့လူဦးရေ.. ရဘီလီယန်ကျော်ပြီမို့.. ဒီကမ္ဘာမြေရဲ့.. ပေးနိုင်ထုတ်နိုင်စွမ်းအားနဲ့.. ချိန်ဆတွက်ရင်.. များမကြာမှီနှစ်တွေမှာ.. လူသားတွေရှင်သန်ရေးအတွက်.. အစားအသောက်ပြဿနာတွေတက်တော့မယ်လို့.. ခန့်မှန်းနေကြတယ်တဲ့..
စားနေကြ.. ကြက်၊ဝက်၊အမဲသားတွေအစား.. အင်းဆက်တွေကိုပါစားကြဖို့အကြံပေးတာ.. သတင်းထဲနားထောင်လိုက်ရတယ်..
အဓိကက.. ပုရစ်တဲ့…။ ပရိုတိန်းကြွယ်ဝဆိုလား..
လူဦးရေတိုးနှုန်းကျလာအောင်… လုပ်ကြရမှာလည်း.. တပိုင်းလို့ထင်တယ်..။
တရားဝင်ယူလို့ရတဲ့.. လိင်တူလင်မယားတွေ.. မိဘမဲ့.. အဆင်မပြေ… ကလေးတွေ.. မွေးစားကြမယ်လို့… ထင်တယ်..
အရင် မိုးကြိုးငှက်ငယ် လေးများထဲ မှာ တစ်ယောက်၊ နှစ်ယောက် က တကယ် ကို ချောတာ အဟုတ်ဘဲ။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီ သူတွေက လွဲလို့ မြန်မာပြည်က ဂေး တွေ အားလုံးနီးပါး ရဲ့ မျက်နှာ၊ ဇလုပ်၊ ကိုယ်ခန္တာ၊ အသားအရည် ဘယ်လိုမှ မိန်းမ နဲ့ မတူတာအမှန်ပါ။
ကျားကြီးတွေမှန်း သိသာပါတယ်။ အဲလို လူကြီးတွေက နွဲ့ နေတာမို့ ကြည့်မကောင်းတာအမှန်ပါ။
ယိုးဒယားမှာ ဂေးပွဲ ကြည့်ဖူးတယ်။
တကဲ့ မိန်းမ တွေထက်တောင် လှ တာအမှန်ဘဲ။
သူတို့ အသားအရည်၊ မျက်နှာ၊ ခန္တာ မယုံနိုင်အောင်ဘဲ။ ဇလုတ်တောင် မရှိကြဘူး။
အဲဒါမျိုးကျ ကြည့် ကောင်းသေးတော့။
တစ်ချို့ တွေ ကျားကြီးမှန်းသိရက် တကယ်ကြွေကြတာ။
ဒါမျိုးမှာ ထိန်းချုပ်မှုအား နည်းရင် ပေါင်းကြဖို့ ဝန်မလေးဘူးပေါ့။
တကယ်ပင်ကိုယ်စိတ် ကို က ဂေး နေသူတွေ ကိုတော့ အတင်း ပုံပြောင်းဖို့ မလွယ်ပါဘူး။
အဲဒီ ဂေး တွေ ကို အသုံးချ နေသူတွေ က ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းမယ် ထင်ရဲ့။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ အချင်းချင်း တကယ် မေတ္တာမျှ လဲ ယူ ပါစေ။ ဘာဖြစ်လဲ။
သူတို့ လို လူတူချင်း၊ စိတ်တူချင်း မို့ ပိုပြီး တစ်ခြားသူကို ယူတာထက် ပိုပြီး နားလည်ပေးနှိုင်မှုရှိ မှာလို့ တွေးမိလို့ပါ။
အများပါတ်ဝန်းကျင် ကို အနှောက်အယှက် မပေးရင်ပြီးတာဘဲ။